မိန်းကလေးများ အပျိုစင်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုပြီ ~ Myanmar Express
From : ပီတိ(ပေကြီး) မှောင်သည်ထက်မှောင်သောညလေးများညသည်မှောင်လွန်းလှ၏ထိုညထက်ပိုလို့မှောင်သသည်ကားညကိုတောင်ချောက်လှန့်ကုန်၏အမှောင်ညကို အမှောင်ဖြင့်ပေါင်းလိုက်သောအခါညသည်မှောင်ထက် မှောင်သွား၏။ယခုဆောင်းပါးကိုရေးဖို့စာရေးသူအတော်စဉ်းစားခဲ့ရ၏။ရေသင့်မရေးသင့်ချင့်ချိန်ရ၏။အထပ်ထပ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သောအခါရေးသင့်သည်ဟု ယူဆမိလာ၏။ဟုတ်သည် မှန်တာကိုရေးတာပဲအပြစ်တင်မယ်ဆိုလဲတင်စေတော့ ရေးချင်တာတော့ရေးကိုရေးရမည်။အမှန်အားဖြင့်ညသည်မှောင်၏။ သို့သော် အမှောင်ကြီးတော့မဟုတ် မှောင်တစ်ဝက်လင်းတစ်ဝက်သာဖြစ၏်။လသာညများမှာ အလင်းဓါတ်တော့ရှိသေး၏။ သို့သော် လသာသာမသာသာ ည သည်မှောင်၏။ အ ဘယ့်ကြောင့်ပါနည်း။ပြီးခဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်း ကျနော် ရန်ကုန်သို့စာပေကိစ္စဖြင့်ခဏတိုင်း ရောက်ရှိခဲ့ရာ ည၏မှောင်မိုက်ခြင်းများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရ၏။ရင်လေးမိသည်။ပုဇွန်တောင် ဘူတာအနီးသံလမ်းတစ်လျှောက် ပြည်သူ့ရင်ပြင် နှင့် ကျနော် ရောက်ခဲ့သမျှ လူလွတ်လပ် ရာမြို့တွင်းလမ်းဘေး မှန်သမျှ သူတို့တွေပျော်တော်ဆက်နေကြ၏။ညဟုသာဆိုလိုက်ရသော် လည်း ညသာမကနေ့ပိုင်းတွင်ပင်နှစ်ပါးသွားနေကြပြီ။အံ့သြမိသည်။ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ မလွယ်တော့ပြီ လူမြင်သောနေရာပါမကျန်မရှက်နိုင်တော့ပဲစိတ်အလိုကိုလိုက်နေကြသည်။မယုံသူများကိုယ်တိုင်သွားလေ့လာစေလိုသည် နေ့ပိုင်း လျှော်ကားဥယျာဉ် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ ပြည့်သူ့ရင်ပြင် ကန်တော်ကြီး တို့လိုနေရာမျိုးက စ ဥယျာဉ်ပန်းခြံမှန်သမျှ နှင့် စေတီဘုရားများပေါ်ထိ သွားကြည့်လိုက်ကြစေချင်သည်။လူငယ်တို့သဘာဝချစ်ကြိုက်ကြလို့ ချိန်းတွေ့ကြသည်ကားအပြစ်မဆိုသာ။ သို့သော် ချိန်းတွေ့ရုံတင်ဆို ဘယ်သူက သ၀န်ကြောင် ဒီလိုမျိုးရေးချင်မည်နည်း။ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ သူတို့ခရီးသွားကောင်းနေကြသည့်မြင်ကွင်းကားမည်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်း။ သေချာလိုက်ကြည့်နေလို့ မြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါ လူမြင်ကွင်းမသိမသာ စိတ်အလိုလိုက်နေကြသည်မှာ ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက်ရသည်။ ထီးကာရုံဖြင့်အပြည့်မလုံပါ အချို့အတွဲများထီးပင်မကာ ပန်းပင်ဘေးမှာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေကြသည်။ တွေ့လိုက်သည့် စုံတွဲတိုင်းနီးပါ ထိုသို့အတူနေခြင်းမျိုးမဟုတ်သော်မှ အနည်းဆုံး ပါးစပ်ခြင်းဆက်သွယ်နေကြသည်။အိမ်ထောင်မပြုမှီ အပျိုလူပျိုတို့ အတူနေသောဝါဒဆိုးကြီးသည် ။မြန်မာနိုင်ငံသို့ချိန်းခြောက်လို့လာပေပြီယနေ့အမျိုးသမီးပျိုလေးများ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ကို ရိုက်ချိုးနေကြသည် တန်ဖိုးမထားကြ နွမ်းပါးအောင်လုပ်နေကြခဏတာဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ကိုသူတို့လိုက်ရောလွန်းသည် မနူးလိုက်နှင့်လိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသည်ဒီအားနည်းချက်ကို သိနေကြသောကိုကို လူလည်တို့ကလဲ မျောက်လက် ငပိအပ်လိုက်သည့်ပမာ ရသာရှိသာ၏တစ်ဆိုဆိုလုပ်နေကြသည်။စိတ်ထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ချစ်သူဘ၀မှ လမ်ခွဲလိုက်သောအခါ ဘယ်လိုလုပ်မည်နည်း။ဘ၀မှာအမည်းစက်တို့ကလိုက်နေတော့မည်။ချစ်သူသစ်ရှာဖို့ပင်ကိုယ့်စိတ်ိမလုံမလဲဖြစ်ရတော့မည်။ဆေးသောက်ပျောက်ခေတ်ကြီးမှာ ဒါမျိုးရေးမနေပါနဲ့ဆိုကြဦးမည်။ဆေးဆိုသည်မှာ တန်ဆေးလွန်ဘေးဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်တို့ရဲ့ပြောပြချက်အရ တားဆေး သုံးလွန်းသောအမျိုးသမီးများသည် အသားအိမ်ရောဂါရနိုင်ကြောင်းနှင့် ဆေးမတိုးတော့ပဲ ကိုယ်ဝန် တည်နိုင်ခြင်း မွေးလာသောသားသမီးများလူစဉ်မမှီဖြစ်တတ်ခြင်းတို့အပြင် အခြားဆိုးကြိုးများစွာ ခံစားရကြောင်းသိရသည်။အိမ်ထောင်မပြုသေးလို့ အပျိုလူပျိုဟုခေါ်နေရသော်ငြားယနေ့ခေတ်သည် အပျို လူပျိုဂုဏ်ရည်တို့မရှိကြတော့ လှပသောဖြူစင်သောဘ၀ကိုမပိုင်ဆိုင်ကြတော့အများစုမှာ ဒီသို့သာဖြစ်သည်။လူ့ဘ၀ကိုရလာဖို့အလွန်ခက်ခဲလှသည် ။အလွယ်ရလာသည်မဟုတ် ။ထိုသို့သောဘ၀ကို ကိုယ်ကျင့်သီလမဲ့ စွာ ဘ၀ပျက်သုဉ်းသည့်အဖြစ်မျိုးရှောင်ကြဉ်စေလိုပါသည်။ဆုိးဝါးဆုံးအခြေနေကို ယနေ့လူငယ်များနှင့်မိဘ များသတိထားဖွယ်တင်ပြစေလိုသေးသည်။ယနေ့အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်လူ ငယ်များ အလုပ်သွားတစ်ခါ အလုပ်ပြန်တစ်ခါ အတူတွေ့ဆုံနေကြသည်။ရိုးရိုးတွေ့ခြင်းမျိုးမဟုတ် နှီးနှောခြင်းအမြဲပြုနေကြသည် ။မနက်ပိုင်းအလုပ်အသွားမသိသာလှသော်လည်း ညနေအလုပ်ဆင်းမှောင်ရီချိန်တွင် ပိုလို့သိသာစွာတွေ့ရသည်။ ပုဇွန်တောင်ဘူ တာနှင့် ဘူတာကြီးကြားအလွန်ပေါ သည် ထမင်းချိုင့်လေးများဘေးမှာ ချ နှစ်ပါးသွားကြသည် ပြီးမှအိမ်ပြန်သည်။ကဲ ဘယ့်နဲ့လုပ်ရပါ့။ မြို့တွင်းလူလပ်ရာနေရာလည်းထိုတိုင်းပင် လူထူထပ်ရာနေရာများမှာပင် လမ်းဘေးကားရပ်ခါအလုံပိတ်ပြီး ကားလှုပ်အောင်ကနေကြပြီဆိုးဝါးလိုက်ပါဘိ။ရန်ကုန်မြို့အချို့ပန်းခြံဥယျာဉ်ကြီးများသည် ည ၁၀ နာရီကျော်သည်ထိမပိတ်ပဲ ဖွင့်ပေးထားသည်မှာ သူတို့အတွက်မဟာအခွင့်ရေးကောင်းကြီးဖြစ်နေကြသည်။ရန်ကုန်မြို့ကိုဦးတည်ရေးနေသောကြောင့် အခြားမြို့များမပါမထင်လိုက်ပါနှင့် သိပ်တော့မထူးလှပေ ။ မန္တလေးလိုမြို့ကြီးများတွင် မန်းတောင်ခြေတောတောင်ကြားနေ့ခင်းပိုင်းပင်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွား ခါ စိတ်အလိုလိုက်နေကြသည်။ ညပိုင်း ဘူတာကြီးအနောက်ဘက် ၇၉ လမ်း၃၁x၃၄လမ်းကြားတွင် အလွန်ပေါသည် ရန်ကုန်လိုမျိုးလမ်းဘေးကားရပ် အလုံပိတ်ခါ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေကြသည်လဲရှိသည်။ မိဘများသတိထားပေးကြစေချင်ပါသည်။အဆိုးဝါးဆုံးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကို ကျနော်မြင်ခဲ့ဖူးသည် မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုရားဝန်းတစ်ခုအတွင်းစုံတွဲအလွန်ပေါလွန်းလှသည်။ ဘုရားရင်ပြင်ပန်းပင်နားမှာ သူတို့ အတူနေကြသည်။ကျနော်ဘုရားဖူးသွားခဲ့သောထိုဘုရားမယ်မှောင်ရီပျိုးသောအချိန်ဖြစ်သာ ဘုရားဥမှင်လိုင်ထဲတွင် မောင်မယ်နှစ်ဖော်အတူလှဲအိပ်ခါမတော်တရောပြုလုပ်နေကြသည်အံ့ရော။ဘုရားအထဲတွင်ထိထိုသို့မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခြင်းမှာရိုင်းလွန်းလှသည်။ပုဂံ ညောင်ဦး ရှိဘုရားများတွင်လည်းထိုနည်းတူများစွာတွေ့ရသည်။ဒီလောက်ထိဆိုးနေသည်မို့ကျနော်ဒီစာကိုရေးသည်မှာလွန်အံ့မည်မထင်။ရေးဖို့ကျန်နေပါသေးသည်။ ထို့သို့ဖောက်ပြန်နေသော အထဲတွင် အလွန်ငယ်နေသေးသောအထက်တန်း နှင့်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးများပင် ပါနေသည်မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်အတိဖြစ်သည်။ကျောင်းဝတ်စုံများဖြင့် တွေ့နေကြသည်ကို ကြုံခဲ့ဖူးသည်။အော် အားလုံးဖောက်ပြန်နေကြပေပြီ။ကျနော့်မိတ်ဆွေများက ပြောဖူးသည် ခုခေတ်ကတော့ဒီတိုင်း ကြီးပဲ မောင်ရေ့ ချစ်သူသမီးရည်းစားတိုင်းနေ့စဉ်ချိန်းတွေ့တိုင်း သူမပါမပြီးဖြစ်နေပြီ လမ်းဘေး ပန်းခြံ ဘုရားတွေတင်မက ငွေသုံးရင်သုံးနိုင်သလို တည်းခုခန်း ဟိုတည် တွေမှာ တစ်ဆက်ရှင်ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့အခန်းတွေ ယူပြီး ကာမမှာနစ်မွန်းနေကြပြီ။အချို့ဆိုအိမ်ကို ဒီညဘယ်အိမ်မှာအိပ်မလို့ ခရီးသွားမလို့နဲ့အကြောင်းပြပြီး ညလုံးပေါက်ချစ်သူနဲ့အတူဟိုတယ်မှာသွားအိပ်ကြတယ်တဲ့။ မိဘတွေသားသမီးကိုမရုံသင့်တော့ပါ။ချစ်သူခြင်းကာမဆက်စပ်မှုကို ယနေ့ ထမင်းစားရေသောက်ပမာအလွယ်တကူပြုလုပ်နေကြသည်။ရိုင်းသလိုဖြစ်သွားမလားတော့မသိ။ဘယ်အဆင့်ထိယနေ့အမျိုးသမီးတွေ နှိမ့်ကျသွားသလဲ တန်ဖိုးမဲ့သွားသလဲဆိုလျှင် ပြည်တန်ဆာမများလောက်ပင် တန်ဖိုးမရှိဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်ဆိုသော် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်နေ့စဉ်ပုံမှန် ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူနဲ့တွေ့တိုင်းအမြဲ စိတ်လိုလိုက်ခါအတူနေကြသောကြောင့်ပင်။ပြည်တန်ဆာမ များကငွေရမှ ကာမကိုပေးကြသည်။ ယနေ့သမီးပျိုတော်တော်များများကတော့ ချစ်သူနဲ့တွေ့တိုင်း ဖတီး အလွတ်တန်းပေးဆပ်နေကြသည် စည်းမရှိကမ်းမရှိ။ ဒါကြောင့် ပြည်တန်ဆာက တောင်စည်းရှိနေသည်။ပြည်တန်ဆာထက်တန်ဖိုးကျနေကြပြီ။အော်ခေတ် ခေတ် ဆိုးဝါးလိုက်တဲ့အဖြစ် ။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင် တန်ဖိုးမမဲ့အောင် မေပျိုတို့ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားကြပါ ။ နှမျှောကြပါ ။ လို့ဆိုခြင်သည်။မိဘများလည်း သားသမီးများကို အထူးဂရုပြုကြဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ကဲကျနော် ရေးသည့်သလား ရေးတော့ပြီးပြီ မှန်တာကိုရေးလို့ စိတ်တိုလဲတိုစေတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားလာတတ်ရင်ကျေနပ်သည်။ကိုကို ညီညီ တို့ကိုလည်းမှာချင်ပါသည်။ အခွင့်ရတိုင်းမယူကြပါနှင့် သူ့ကိုတကယ်ချစ်လျှင်သူ့ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားရမည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ လူပျိုဘ၀ ကိုအလွယ်မစွန့်ပါနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ မိန်းကလေးဆိုတာ ပျော့ သည် ထို့ကြောင့်ယောက်ကျားလေးတို့စွဲရာပါတတ်သည်။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းမယူကြစေချင်။မကောင်းသည့်ဘက်မှာ အခွင့်ကောင်းယူလျှင် ကောင်းသည့်ဘက်မှာ ပျော့ညံ့မှန်းသိပ်သိသာ သည် အားကိုးထိုက်သောယောက်ကျားလေးမဟုတ်တော့။ထို့ကြောင့် …..ယနေ့ခေတ်မောင်မယ်များ စိတ်အလိုလိုက်မှုအစဉ်ထားကိုယ့်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထား ကိုယ်ကျင့်တရားမြဲစို့လားဟုဆိုလိုက်ချင်ပါသည်။ဘ၀လေးများလှပစေလိုသောဆန္ဒဖြင့်…စာဖတ်သူကိုလေးစားလျှက် Myanmar Express
3 July 2012 21:49
Myanmar Express ရေ...ဟိုအဘွားကြီးနဲ့ သူ့သားကြီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး..ဘာလေး..ဖောက်သည်ချပါဦးဗျ...နောက်လိုက်တွေက တမင်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး..ရှောင်ကွင်းရေးနေတာ..အဘွားကြီးလုပ်နေတာတွေ..မကြိုက်လို့..သားနဲ့အမေ..ပြသနာများတက်ထားကြလားဗျာ..လုပ်ပါဦး..အားလုံးသိရအောင်...အားကိုးပါတယ်..
4 July 2012 09:33
THIS POST IS 100PERCENT TRUE
4 July 2012 13:15
အဲဒီလောက်တော့ မဆိုးပါဘူးကွာ။ စောက်ပို မလုပ်ပါနဲ့
4 July 2012 14:51
4 July 2012 16:48
ဒီလိုဆိုတော့...ဈေးပေါပေါနဲ့ စားရတာပေါ့...ကြိုးစားထား... တို့မြန်မာတွေ ခေတ်မှီလာပီ...fighting
4 July 2012 20:16
အင်း လေ ဟုတ် မှာ ပါ ။ဒါ ပေ မဲ့ ပြော နေ လဲ အ ပို ဘဲ။ ဒီ တော့ ပြော မ နေ နဲ့ တော့။။။။။။။နော်။
စောက်ပိုတွေ လုပ်မနေနဲ့ ဒီကိစ္စကိုမလုပ်ဘူးပဲနဲ့ ဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမသိဘူးကွ ....၊အခုမှ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုး လာမလုပ်နေနဲ့...။
yes, right This about my agree.plz don't give you life. easily don't destory!thank, your own life happiness.
5 July 2012 19:37
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆုံးမ သွားတာကြားရ တော်လိုက်တာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခိုင့်အဖြစ်လေးကိုပြောပြရစေ စာရေးသူအကိုကြီးတွေ့သလိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အပျိုမိန်းကလေးတွေရှိသလို တန်ဖိုးထားရက်နဲ့အဖျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့ခိုင့်လိုမိန်းကလေးတွေလဲ ရှိမှာပါ ခိုင့်ရဲ့ရည်းစားဦးက အထက်တန်းကတည်းကအသေအလဲကြိုးစားလိုက်တာ ဆယ်စုနှစ်လောက်နီးပါးမှ ရည်းစားဖြစ်သွားတာပါအပျိုစင်ဘဝကို မင်္ဂလာဦးညမှ ပေးမယ်ဆိုတာ ခိုင်ရည်မှန်းချက်ပါဘယ်သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်လက်ထပ် အဲဒါခိုင်ဆုံးဖြတ်ထားတာပါသို့ပေမယ့် ငိုယိုတောင်းပန်တဲ့ကြားက ကာမဘီလူးလိုယူသွားတော့ ခိုင်ဟာ မှားပြီဆိုပြီး လက်ထပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုပေမယ့်ရုပ်ရှင်ရုံမှာတောင်မရှောင် ဟိုလုပ်ဒီလုပ်ယုတ်မာပြီး ပိုက်ဆံမရှိလို့လက်မထပ်နိုင်တာအကြောင်းပြပေမယ့် မကြာခဏအတူနေချင်နေတာပါအဲတော့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ခိုင်တို့မိန်းမတွေဘဝကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်။ချစ်သူကိုအလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်တဲ့မိန်းမပျော် မိန်းမပေါတော့မဟုတ်ပါအဲ့ကတည်းက ခိုင်မှာ လူမသိသူမသိ စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်ဒါပါပဲ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခိုင့်လိုမိန်းမသားအဖို့အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးဖို့ဘယ်လောက်ခက်သွားပြီလဲဆိုတာ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်သူ့အတွက်တော့ အပြာကားတွေကြည့်ပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရတာ မိနစ်ပိုင်းပေမယ့်ခိုင်ကတော့ တဘဝလုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရသွားပါပြီတန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းမသားအဖို့ ဒါဟာခြောက်အိပ်မက် ခုထိဖြစ်နေတုန်းပါပဲ :(ယောက်ျားတွေ ကိုယ်ချင်းစာကြပါမိန်းမတွေဟာလိင်ကျေးကျွန်တွေမဟုတ်ပါဘူးလိင်အခမဲ့ပေးကမ်းသူဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကြာရှည်အဲလိုဘဝနဲ့မနေကြဘူးထင်ပါတယ်
7 July 2012 22:26
ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ ညစာစားပွဲမှာ သမ္မတကြီး မိန့် ခွန်းပြောပါတယ်။ မိန့် ခွန်း ပြော အပြီး မှာတော့ ဧည့်ပရိသတ်က သမ္မတကြီး သူ့ ရဲ့ စားပွဲကို ပြန်ေ...
အာရပ်ဆော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒူဘိုင်းမြို့ရှိ အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံ ကြယ် ၇ ပွင့် ဟိုတယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Burj Al Arab ဟိုတယ်အနေနဲ့ လာရောက်တည်းခိုတဲ့ ဧည့်သည်များအာ...
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဖျော်ဖြေကပြမည့် ကကြိုးကကွက် ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
[image: အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဖျော်ဖြေကပြမည့် ကကြိုးကကွက် ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်]
ဟားခါး မေ ၂၁ ချင်းပြည်နယ် ဟာ...
မိတ္ထီလာ ကိုင်တွယ်ပုံ ထုံးစံအတိုင်း ဒေါ်စု အစိုးရကို ဝေဖန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားရေးစနစ်ဟာ လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှု အောက်မှာ ရှိနေ တယ် လို့ မြန်မာ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ဖြူးမြို့ ခေါင်းဖြတ် လူသတ်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ တောင်ငူတစ်ခရိုင်လုံးရှိ အမျိုးသမီးများ၏ လက်ဗွေရာများ စစ်ဆေး
တောင်ငူခရိုင် ဖြူးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီး၏ လက်ဗွေရာကို မေလ ၂၀ ရက် နေ့မှ စတင်ကာ တောင်ငူခရိုင်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ...